Indlela yokuhlobisa igumbi lothando kwindoda | Amadoda aneSitayile
Indlela yokuhlobisa igumbi lothando kwindoda
Ngaba unomhla okhethekileyo kunye nenkwenkwe oyithandayo? Ngokuqinisekileyo uya kugqiba emva kwemini okanye imini ngombono okhethekileyo ... kwaye ilele kwindawo enomtsalane. Kuyasivuyisa oko iimeko ezizodwa zigqibelele kwaye thina njengesibini singenza konke okusemandleni ukwenza i igumbi romantic indoda.
Indawo egqibeleleyo ingaba igumbi olithandayo endlwini yakho, indawo odibene kuyo okanye igumbi elifanelekileyo lokukhumbula. Ingcamango, inkohliso, uthando kunye nayo yonke into onokuyibonisa ngothando lwakho iya kugqibelela ukuze ukwazi phuma umlingo.
1 Iqala ngomnyango wegumbi
2 Indlela yokuhlobisa igumbi lothando
2.1 Ukukhanya kwendawo
2.2 Ivumba legumbi
Iqala ngomnyango wegumbi
Ukuba ukufikelela kwigumbi kuyipaseji, inokusebenza kakhulu. Ukuba into onayo itikiti elincinci, akukho nto eyenzekayo, inokwenziwa itempile encinci ukukhuthaza ukufika kwindawo.
Sinokuyihombisa njani? Isango lokungena elinezibane ezintle ezikhokelela, ezinye iipetali zerose, iilekese ezincinci kwaye ngakumbi amakhandlela. Yindawo apho uthando lwakho luya kungena khona kwaye sele umkhuthaze ukuba athande ukothuka okulandelayo.
Indlela yokuhlobisa igumbi lothando
Umnyango wegumbi yayiyi-snack kwaye ngoku kufuneka ufumanise ukuba yonke into iqala apha. Abasetyhini bathandeka kakhulu kwaye zonke iinkcukacha zenziwe ngee-nuances ezininzi.
Liyinxalenye esisiseko, ekubeni eyona nto ibalulekileyo yimbono yokuqala. Ngokuqhelekileyo siyithanda ngokwenene ukukhanya okumnyama kunye nomoya ofudumeleyo kwigumbi lifanelekile. Amakhandlela isoloko iyinxalenye ebalulekileyo ukunika ukuba touch yothando, okanye izibane ze-LED ezincinci ingakanani into esinayo kwiibhazari zethu ezininzi.
Izibane ezisecaleni kwebhedi ziyakwazi ukugqoka kunye netshefu phezu kwayo ukususa ilitha kwiibhalbhu. Isibane esikhulu kufuneka sicinywe kwaye ezinye amakhandlela amancinci ngeenxa zonke ukunika loo mitha yokukhanya.
Kukho amakhandlela amancinci Zihlala iiyure ezininzi kwaye zilungele ukubeka naphi na. Qaphela ngala makhandlela amancinci ajikelezayo kwaye aqiniswe nge-aluminium, kufuneka abekwe kwindawo apho ubushushu babo bungonakalisi. Unokuzibeka kwindawo yokhuni engayi konakaliswa, okanye ngaphakathi kweglasi encinci. Ungadlala kunye namakhandlela ukwenza iindlela ezincinci njengendawo yokungena kwindawo ephambili.
Eli lelinye lamacandelo endiwathanda kakhulu. Ukuba umbono wokuqala wawulula, ivumba likwabalulekile. Amakhandlela anganika ukuba touch of ivumba ukususela ivumba layo lithambile kwaye aliwutshaji umoya. I-air fresheners inokusebenza, nje ukuba ifudumele kwaye ithambile. Ukuqhola umzimba wakho nako kuya kuba yeyona nto iphambili. Endaweni yokunxiba icologne sebenzisa izithambiso zomzimba ezinevumba elimnandi, Iyawaphambanisa amadoda xa esondela eluswini lwakho.
Umhombiso uya kuba sesinye isikhuthazo ekufuneka iqabane lakho liyixabise. Into yokuqala oya kujonga kuzo zonke iingongoma zokukhanya, nokuba ngamakhandlela njengoko sele sikhankanyile okanye ezinye izibane ezikhokelwayo, ezifana nemicu okanye izibane ezinemibala.
Olunye ujoliso luya kuba ibhedi. Kufuneka ube ne imbonakalo ethuthuzelayo oko kukukhuthaza ukuba wazi ukuba kuya kuba mnandi. AmaSpredishithi zimelwe kukuba njalo ithambile kwaye ishushu kwaye umkhusane owukhethayo kufuneka ube fluffy. Imibala onokuyikhetha inokuvela kwi obomvu okanye omfusa. Imithwalo kufuneka ibe ngumlinganiselo ochanekileyo wobunzima, kwaye i-cushions ingaba ninzi kwaye ithambileyo, ehlobisa ibhedi ngesitayela.
Uhombise ibhedi ngeepetali kwaye ibandakanya iipleyiti ezincinci kunye nezinye ukutya okucebisayo. I-appetizers ikhuthaza ulonwabo kwaye sinokucebisa kwiitshokholethi, ii-canapes okanye iziqhamo ezinencindi njengamaqunube. Iziselo azinakungabikho nokuba, ungabandakanya iiglasi ezimbalwa etafileni ukuze ube nazo iwayini okanye i-cava.
Umhlobiso wesibini unokuhamba ngokuhlekisayo iibhaluni ezimilise intliziyoUkuba umxholo wesethi ubomvu, akuyi kuba yinto ephosakeleyo ukusebenzisa lo mbala, ubuncinci ngowona wothando. Zinokuxhonywa kunye okanye ngabanye, ngezaphetha ezintle.
Isilwanyana esixutyiweyo inokuba yinxalenye yomhombiso wothando. Kwaye awukwazi ukulibala igumbi lokuhlambela, kuba inokuba yenye yeekona ezibaluleke kakhulu ibhafu, enamakhandlela kunye nee-oyile ezibalulekileyo. Ungabandakanya ibhedi yokuphulula umzimba kwigumbi, kwakhona zihonjiswe ngamagqabi apho ungasebenzisa izandla zakho okwenyani kunye ukuphumla massage.
Ungalibali malunga ileta yothando. Ukuba uthathe isigqibo sokulungiselela igumbi lothando, awukwazi ukuphosakela oko isibhengezo sothando. Iinkcukacha ezincinci okanye ezothusayo banokugqiba ngokuhlwa. Unokongeza isipho esincinci esongelwe ngendlela ekhethekileyo ukuqala ubusuku obugqibeleleyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Kufanelekile » Isibini kunye nokwabelana ngesondo » Indlela yokuhlobisa igumbi lothando kwindoda
Kuthetha ukuthini ukwanga ngamandla endodeni